September 2014 ~ Myanmar Forward
အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အိုင်အက်စ်တပ်များ အခြေစိုက်စခန်းများပျက်စီး
အမေရိကန်ဦးဆောင်သောလေကြောင်းတိုက်ပွဲသည် မြောက်ပိုင်းရှိဆီးရီးယားတပ်များကို ကောင်းစွာဖျက် ဆီးတိုက်ခိုက်နိုင် ခဲ့ကြောင်း သတင်းများအရသိရသည်။ ညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုသည် အီရတ်က ဆီးရီးယား ဘက်သို့ အမေရိကန်၏လေကြောင်းတိုက်ပွဲတိုးချဲ့လိုက်ကြောင်း ပြသလိုက်သလို တိုက်ပွဲအခြေအနေ ပြင်းထန်လာနေသည်ဆိုသည်ကိုလည်း ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လေကြောင်းဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများမှာ ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်ပြီး တူရကီ အနောက်မြောက်ဘက် အလက်ပိုအနီးကစ၍ အီရတ်နယ်စပ်အထိတောင်ပိုင်းကို မိုင်ပေါင်း ၂၂၀ အထိရှိကြောင်း အမေရိကန်ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးဌာနနှင့် မြေပြင်မျက်မြင်သက်သေများကဆိုသည်။
အဓိကပစ်မှတ်က IS (Islamic State) အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ISIS (သို့မဟုတ်) Islamis State of Iraq and Syria ဟုလည်းသိကြသည်။ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့များခြေကုတ်ယူထားသည့်
မြို့ လေးမြို့ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်အာဏာပိုင်များကပြောကြားသည်။
အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် နိုင်ငံများမှာ ဘာရိန်း၊ ဂျော်ဒန်၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ကာတာနှင့် ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ ဂျော်ဒန်အစိုးရက၄င်း၏ လေတပ်မှ အကြမ်းဖက်သမားပစ်မှတ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
တိုက်ပွဲထဲမှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊ ဗုံးကြဲလေယာဉ်၊ လက်နက်တပ်ဆင်ထားသည့် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၊ ပါရှန်ပင်လယ်ရှိ အမေရိကန်သင်္ဘောမှပစ်လွှတ်သော တိုမာဟော့ခ် ဒုံးကျည်များအသုံးချခဲ့ကြောင်း ပင်တာဂွန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သည့် ပစ်မှတ်များတွင် အိုင်အက်စ်တပ်သားများ၊ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများ၊ ဌာနချုပ်များနှင့် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးဌာနများ၊ သိုလှောင်ရုံများ၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးဌာန၊ ထောက်ပံ့ရေးနှင့် စစ်လက်နက်တပ်ဆင်ထားသည့် ယာဉ်များပါဝင်ကြောင်း ပင်တာဂွန်က ထုတ်ပြန်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမေရိကန်က အလက်ပို၏ မြောက်ဘက်ရှိ ကိုရာဆန်အုပ်စုဟု သိကြသည့် အယ်ကိုင်ဒါးလူဟောင်းများ၏ ကွန်ယက်အဖွဲ့ကိုလေကြောင်းမှ
၈ ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်နေကြောင်း ပင်တာဂွန်ကဆိုသော်လည်းအသေးစိတ်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေ။
အလက်ပိုအနီးအမေရိကန်ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည့် သူပုန်များကိုတိုက်ခိုက်နေသော အယ်ကိုင်ဒါးကွန်ယက်အဖွဲ့ကို အမေရိကန်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ ယင်းကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် ခုနစ်ဦးနှင့် အရပ်သား ရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များနှင့် အတိုက်အခံအဖွဲ့များကပြောသည်။
ရှားပါးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသော မြန်မာ့ရိုးရာ ဖိုးသူတော်ယိမ်းအက ပြန်လည်ဖော်ထုတ်
Posted by drmyochit Tuesday, September 23, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ |3comments
မုံရွာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၂။
ရှားပါး ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသော မြန်မာ့ရိုးရာ ဖိုးသူတော်ယိမ်းအက ကို စက်တင်ကာ တတိယပတ်က မုံရွာမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အလှူပွဲ တစ်ခုတွင် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်က ပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖိုးသူတော်ယိမ်းအကကို ဘုန်းကြီးပျံပွဲ၊ အလှူပွဲ၊ ဘုရားထီး တင်ပွဲ စသောဘာသာရေးပွဲများ တွင် ကပြဖျော်ဖြေကြသည်။ ကိုယ် ပိုင်သီချင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အကဖြင့် တစ် ဖွဲ့လျှင် အနည်းဆုံး ၁၂ယောက် ပါဝင်ကပြကြပြီး ကြက်တိုက်ဖိုး သူတော်နှင့် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်း ပါဝင်ကပြရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရ ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ခေတ်စားလာ သော ယိမ်းအကတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ကပြ ဖျော်ဖြေမှု နည်းပါးလာပြီး ယခုအခါ မုံရွာမြို့ ထန်းတောရပ်ကွက်မှ ဖိုး သူတော်ယိမ်း အကကို ပြန်လည်ဖော် ထုတ်ကပြရာမှ ပြန်လည်အသက် ဝင်လှုပ်ရှားလာသော ယိမ်းအက တစ်ခုဖြစ်သည်။
SMW-3ရေအောက်ကေဘယ် ဆက်ကြောင်း ပြုပြင်ပြီးကြောင်းကြေညာ
Posted by drmyochit Tuesday, September 23, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
SMW-3ရေအောက်ကေဘယ် ဆက်ကြောင်းပြုပြင်မှု ယနေ့ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းမှ ကြေညာသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၀၁း၁၆ နာရီတွင် ပြုပြင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံအကြား ပြတ်တောက်လျက်ရှိသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ကြောင်းလိုင်းများ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ ၁၃ ရက် ၀၀း၀၈ နာရီတွင် အင်ဒိုနီးရှား ရေပြင်ပိုင်နက်ရှိ ပင်လယ်ရေအောက်၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော SMW-3 ရေအောက်ကေဘယ် ချို့ယွင်းမှုကို SMW-3 အဖွဲ့ အစည်းမှ ကေဘယ်ပြုပြင်ရေး သင်္ဘောဖြင့် ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆင်းကတ်များလာမည့်နှစ်မှသာ ရောင်းနိုင်မည်ဟု ရတနာပုံဆို
မိုဘိုင်းဖုန်းဆင်းကတ်များ စတင်ရောင်းချမှုကို လာမည့် နှစ်မှသာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ရွေးချယ်ခံထားရသည့် ရတနာပုံ တယ်လီပို့မှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ရတနာပုံ တယ်လီပို့သည် ဖုန်းဆင်းကတ်များ စတင်ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းကာ အခြား ဆက် သွယ်ရေး အော်ပရေတာများအားယှဉ်ပြိုင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးတော့မည်၊ ဆင်းကတ်များအခမဲ့ဖြန့်ဝေမည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။
အဆိုပါ သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရတနာပုံ တယ်လီပို့မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးရှိန်းသူအောင် က ”ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ နည်း ပညာပိုင်းအ တွက်ေ တာ့ ပြည် ပဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းသွားမှာပါ။ လောလောဆယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့မှ စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ ရှယ်ယာ ကိစ္စတွေ ရှင်း ရှင်း လင်းလင်း ဖြစ်ဖို့အတွက် ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတာပဲ ရှိပါသေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဆင်းကတ်များအား အခမဲ့ပေးမည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ ရတနာပုံတယ်လီပို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မည့် ကုမ္ပဏီကိုလည်း ရွေးချယ်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ သင့်တော်မည့် ကုမ္ပဏီကိုသာ လေ့လာစိစစ်နေသည့်အဆင့်သာရှိကြောင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ် ပြု လုပ်ပေး သွား ရန်ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
”လိုင်စင်လျှောက်တုန်းက ကုမ္ပဏီကိုးဆယ်ကျော်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ အခုလက်ရှိလုပ်နေတာ သုံးခုပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင် ဖို့လာကမ်းလှမ်းထားတယ်။ ကုမ္ပဏီအားလုံးနီးပါးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူနဲ့ ပူးပေါင်းမယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်နေရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။ယင်း အခြေ အနေများကြောင့် ဆင်းကတ်များ ရောင်းချမှုကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှသာ ရောင်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားအော်ပရေတာများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တတ်နိုင် သလောက် အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများစတင်သည့် အခါတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာရှိရန် ရှယ်ယာ ကိစ္စလုပ်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
မိုင်းတုံက မိုးကြိုးပစ်ခံရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု မပြင်နိုင်သေးတာကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
မိုင်းတုံ၊ စက်တင်ဘာ ၂၃
မိုင်းတုံမြို့က V-Sat ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု မိုးကြိုးထိမှန်ခဲ့လို့ ရန်ကုန်ပို့ပြီး ပြင်နေတာ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းမှာ အခက်အခဲ တွေ့နေရတယ်လို့ မိုင်းတုံ ဌာနဆိုင်ရာ အစိုးရရုံးတွေဆီက သိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မိုးကြိုး ထိမှန်ခဲ့တဲ့ အဲဒီစက်ကို ရန်ကုန်ကို ပြင်ဖို့ ပေးထားတာ ခုထိ ပြင်လို့ရ မရ မသိရသေးဘူးလို့ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် ဆက်သွယ်ရေးရုံး တာဝန်ခံ ဦးမျိုးညွန့်က ပြောပါတယ်။
“မြဝတီမြို့က ဆက်သွယ်ရေးစက် ခဏငှားဖို့ ပြောထားတာ ရမရတော့ မသိသေးဘူး” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ အစိုးရရုံးတွေက ပေးပို့စာတွေကို ရေဒီယို တယ်လီဖုန်း (RT) နဲ့ ကျိုင်းတုံဆက်သွယ်ရေးရုံးကို တဆင့်ခံပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရုံးတွေကို ပြောပေးနေရတယ်၊ ဘဏ်ငွေ လွှဲစာတွေဆို အရေးကြီးတာကြောင့် ပိုမိုဂရုစိုက် ပြောပေးနေရတယ်လို့ မိုင်းတုံ ဆက်သွယ်ရေးရုံးက ကြေးနန်းတာဝန်ခံ ဦးတင်အောင်သက်က ပြောပါတယ်။
“ဖက်စ်လုပ်ငန်းအပြင် အီးတယ်လီဂရမ် ရှိပေမယ့် အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းတော့ လုပ်ငန်းကြန့်ကြာတယ်။ ဒီကြားထဲ အီးတယ်လီဂရမ်က ၁၀ ရက်လောက် ပျက်လိုက်သေးတယ်။ မနေ့ (စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့) ကမှ ပြန်ရတယ်” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ဘဏ်ငွေလွဲ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အရေးကြီး လျှို့ဝှက်သတင်းတွေ ဆိုရင် တယ်လီဖုန်း၊ RT တို့နဲ့ ပို့လို့ မဖြစ်တာကြောင့် ၄၂ မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ မိုင်းဆတ်မြို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ အကူအညီနဲ့ အထူးဆက်သား စေလွှတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တွေကို သတင်းပို့နေရတာကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များပြီး အခက်အခဲတွေ ကြုံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိုင်းတုံမြို့မှာ GSM၊ WCDMA နဲ့ တပ်မတော်ပိုင် ဆက်သွယ်ရေးကြိုးလိုင်းတွေ ရှိပေမဲ့ လိုင်းတွေက မကြာခဏ ပြတ်တောက်နေတာကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 23, 2014, under ဓါတ်ပုံသတင်း,အနုပညာ | No comments
မြန်မာဒီဇိုင်နာ ၂၈ ဦးရဲ့ ဖက်ရှင်ပြပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ပွဲရဲ့ ပထမနေ့အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ရှင်စောပုလမ်းရှိ Myanmar Event Park မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 23, 2014, under အနုပညာ,နိုင်ငံတကာသတင်းများ |3comments
မြန်မာပြည်ဖွား ဘောလိဝုဒ် မင်းသမီး လိုင်လာခမ်းသည် စက်တင်ဘာ ၈ရက်မှ စတင်ကာ "ခန္ဓာကိုယ်လှပမှု ဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်း လဲသည့် ၀န်ဆောင်မှု"ကို လက်ခံ သင်ကြား ပေးလျက်ရှိသည်ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
"ဒီဝန်ဆောင်မှုက မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းက မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ စတိုင်ကျကျ နေထိုင်တတ်တဲ့ အပြင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ နဲ့ လျှောက်လှမ်း နိုင်အောင်ပါ။ လာရောက်တဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ရှိရင်းစွဲ အလှထက် ပြောင်းလဲနိုင်အောင်လို့ ကူညီပေးတဲ့ သဘောပါ။ ဆံဖျားကနေခြေဖျား အထိ လှပနေ ရအောင်လို့အကြံဥာဏ် ပေးသွား မှာပါ။ နောက်ပြီး မျက်နှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်လှပမှု ဆိုင်ရာတွေ ခွဲစိတ်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြံဥာဏ် ပေး ပြီးသိကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန် တွေဆီကို ညွန်ပြပေး မှာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လှပစေပြီး အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ရင်လည်း စတိုင်ကျကျနဲ့ ဖြစ်အောင်လို့ ပါပဲ။ နောက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုတွေ၊ ဆံပင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေက အစ ပါမှာပါ။ ဆံပင်ဆိုရင်လည်း သူနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်စတိုင်ကို အကြံဥာဏ် ပေးပြီး ဆံကေသာ ပညာရှင်ဆီကို သွားရောက်ဖို့ညွန်ကြား ပေးပါတယ်"ဟု လိုင်လာခမ်းက ၎င်းပြုလုပ်ပေး နေသည့် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောသည်။
ယင်းဝန်ဆောင်မှုကို လက်ရှိတွင် သင်တန်းသား သုံးယောက် တက်ရောက်ပြီး ဆွေးနွေးလျက်ရှိကာ ခန္ဓာကိုယ်၊ဆံပင်၊မိတ်ကပ်၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ အသားအရေ ထိန်းသိမ်း မှုများ၊ ပြောဟန်ဆိုဟန်များကို တစ်ပတ် နှစ်ရက်ဖြင့် သုံးပတ်စာ အပြတ် ဆွေးနွေးမှုကို တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ ငါးရာဖြင့်နံပါတ် ၁၂၀၁၊ သံသုမာလမ်း၊ တာမွေ၊ ချမ်းသာဂုဏ်ရောင်ကွန်ဒို၌ လက်ခံ ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။
"ကျွန်မဒီလို ထိန်းသိမ်းမှုတွေက ကျွန်မအိန္ဒိယကို စရောက်ကတည်းက အနုပညာ အလုပ်တွေ စလုပ်တဲ့ အချိန်ကတည်းက ယနေ့ အချိန်ထိ ဆယ်စုနှစ်ကျော် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေနဲ့ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီတို့ကို သွားရောက်စဉ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ သင်တန်းတွေ ကနေပြီး ပြန်လည်မျှဝေ တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေးတွေက လှပတယ်။ စတိုင်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီစတိုင်တွေ ကနေပိုပြီး ပြည့်စုံသွား အောင်လို့ လိုအပ် မယ်ထင်လို့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ အခု ကျွန်မဆီမှာ လာတက်နေတဲ့သူတွေက စတိုင်ရှိတယ်။လှတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်မှုတွေ အပြင်လိုအပ်ချက် လေးတွေကို လိုချင်တဲ့ အတွက်လာရောက်ကြ တာပါ"ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် "ခန္ဓာကိုယ်လှပမှုဆိုင်ရာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသည့်ဝန်ဆောင်မှု"ကိုစတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုပြောသည်။
လိုင်လာခမ်းသည် ယင်းဝန်ဆောင်မှုများ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ အနုပညာ အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ရန် လက်ခံထားသည်များ ရှိသည်ဟု ပြောသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရှိ အနုပညာ အလုပ်များကို မျှတစွာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်ဟု ပြောသည်။ လိုင်လာခမ်းသည် ဒါရိုက်တာ Nee Raj Pathaak ရိုက်ကူးသည့်Bhayaji Superhit ဇာတ်ကားတွင် ဘောလိဝုဒ် မင်းသားSunny Deon နှင့်တွဲဖက်ပြီး ရိုက်ကူး လျက်ရှိသည်ဟု ပြောသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 23, 2014, under အနုပညာ | No comments
ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်၊ ဓမ္မဆရာများအား အသုံးချကာ KIA လူသစ်စုဆောင်း
Posted by Unknown Friday, September 12, 2014, under | No comments
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KIA)သည် ထိန်းချုပ်နယ်မြေများအလိုက် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး သင်းအုပ် ဆရာ၊ ဓမ္မဆရာများအား အသုံးချကာ စက်တင်ဘာ ပထမပတ်မှစ၍ လူသစ်စုဆောင်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ယင်းဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ဒေသခံကချင်ပြည်သူများသည် အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ဘုရားကျောင်းတက်လေ့ရှိရာ ထိုအထဲမှ လူငယ် လူရွယ်များအား သီးခြားတွေ့ဆုံကာ စုဆောင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
``၀တ်ပြုလာတဲ့ အထဲမှာ လူငယ်တွေလည်း ပါတာပေါ့။ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပြီးတဲ့နောက် အဲဒီလူငယ်တွေကို သီးခြားတွေ့ဆုံတာပါ။ လူငယ်တွေကို KIA အဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့ ဖာသာတွေက စည်းရုံးတယ်လို့ သိရပါတယ်´´ ဟု အုပ်ထိန်းသူမိဘတစ်ဦးက ပြောသည်။
``အရင်တုန်းကတော့ ရွာတွေမှာ လာစုတာ၊ တောင်ယာသွားတဲ့လူလည်း ဖမ်းတယ်၊ ကယ်ရီဆွဲတဲ့လူတွေ့ရင် လည်း ဖမ်းတယ်၊ အခုနောက်ပိုင်း ဖမ်းဖို့ လူမရှိတော့တဲ့အတွက် ဘုရားကျောင်းတွေမှာ လာစုတာနေမှာပါ၊ ဒါပေ မယ့် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်တာကတော့ မကောင်းပါဘူး´´ ဟု မလုမိုင်က ဆိုသည်။
KIA အဖွဲ့ အသုံးချခံ သင်အုပ်ဆရာများသည် ဒေသခံကချင်လူငယ်များအား KIA အဖွဲ့ထဲဝင်ရန် စည်းရုံးပြော ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နေရသော်လည်း သာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် သွေဖယ်နေသောကြောင့် ထိုသို့ လုပ်ပေး ရခြင်းကို စိတ်ပျက်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ဒေသခံလူငယ်များအား စည်းရုံးရန် သင်းအုပ်/ဓမ္မဆရာများအား KIA အဖွဲ့မှ ကချင်ပြည်နယ်အား ၀မ်ပေါင် နိုင်ငံ ထူထောင်မှသာ ကချင်လူမျိုးများ ကောင်းစားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်လူမျိုးအား ချစ်ခင်လျှင် ကချင်လူမျိုးတစ်ယောက် အနေဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လူမျိုးရေးဝါဒကို အခြေခံပြီး စည်းရုံးနေကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြားသွားသည်။
KIA နှင့် RSO တို့ ဆွေးနွေးမှုပေါက်ကြားသည့်အတွက် KIA အတွင်း သစ္စာဖောက်များရှိနေပြီဟုဆို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အခြေပြုနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ RSO (Rohingya Solidarity Organization) ၊ BRAT (Burmese Ro-hingya Association in Thai-land) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ မောင်ကျော်နု တို့နဲ့ KIO ဗဟိုကော်မတီ ဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ်လွန်ဒေါင် တို့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း
ရိုဟင်ဂျာ တပ်မတော် ထူထောင် အခြေစိုက်ခွင့်ပြုရေး ဆွေးနွေးမှု အွန်လိုင်းပေါ်သို့ ပေါက်ကြား သည့်
အပေါ် KIO/KIA အတွင်း မကျေလည်မှုများ ဖြစ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
" RSO ကဒီမှာ အခြေစိုက်ဖို့ နယ်မြေတောင်းတာ မှန်တယ်။ ဒီဆွေးနွေးမှု ပေါက်ကြားတာ ကို ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက အတော်ဒေါသထွက်နေတယ်ကြားတယ်။ သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့
ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ်လွန်ဒေါင် ဆိုတာ KIO ဗဟိုကော်မတီ ဝင်တစ်ယောက်။ ပြီးတော့
KIO မှာ နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ပညာရေး တာဝန်ယူထားသူတစ်ယောက်။ ဒီလို ရာထူးကြီးကြီးနဲ့
လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ အပြင်ကို ပေါက်ကြားတာ KIA အတွင်းမှာ သစ္စာဖောက်ရှိနေပြီလို့
ပြောနေကြတယ်။ " ဟု လိုင်ဇာမှ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူက ပြောသည်။
မကြာသေးမီက မြန်မာ့တပ်မတော် အဆင့် မြင့်အရာရှိအချို့က တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ
ဒေသအ ချို့တွင် မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့များစစ် ရေးလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်နေမှုရှိ ကြောင်းနှင့်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် မထိခိုက်စေရန် တပ်မတော်အ နေဖြင့် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေ ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပြောကြား ထားမှုရှိသည်။
KIA နှင့် RSO တို့ တွေ့ဆုံမှု ဗီဒီယို ဖိုင်ကြောင့် KIA နယ်မြေထဲတွင် မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့များစစ် ရေးလေ့ကျင့်မှု အမှန်တကယ်ပင် ရှိနေပြီလား ဆိုသည့် စိုးရိမ်မှုများ ဒေသခံများကြားတွင် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
"မြန်မာစစ်တပ်ကလည်း ပြောထားတယ်ပေါ့။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချို့မှာ အစွန်းရောက်
စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေ လုပ်တာတွေ ရှိတယ်ပေါ့။ ခု KIA က RSO နဲ့ ဆွေးနွေးမှု
ပေါက်ကြားလာတော့ တကယ်ပဲ ပြည်ပက အစွန်းရောက် မွတ်စလင်တွေ စိမ့်ဝင်နေပြီလားလို့ ထင်မိတယ်။ ကျနော်က ကချင်တစ်ယောက်ဆိုတော့ KIA ကို ထောက်ခံတယ်။
ဒါပေမဲ့ မနောမြေမှာ အစွန်းရောက်တွေရောက်လာမှာတော့ လက်မခံဘူး။" ဟု ကိုစောဘောက်က ပြောသည်။
ဆွေးနွေးမှု ပေါက်ကြားလာခြင်းသည်အဖွဲ့တွင်း သစ္စာဖောက်သူရှိခြင်းကြောင့်ဟု
KIA အဖွဲ့အတွင်း ယူဆမှုများရှိနေသော်လည်း ထိုသတင်းပေါက်ကြားမှုသည် သစ္စာဖောက်ခြင်း
မဟုတ်ဘဲ သစ္စာရှိခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
"လူမသိစေချင်တဲ့ ကိစ္စကို ခိုးလုပ်တာ အပြင်ထွက်လာတော့ သစ္စာဖောက်လို့ သူတို့က
ယူဆချင် ယူဆမှာပေါ့။ တကယ်တော့ ဒါ သစ္စာဖောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ သစ္စာရှိတာ။ ကချင်လူမျိုးတွေနဲ့
ပြည်ထောင်စု အပေါ် သစ္စာရှိတာလို့ ပြောရမှာပါ။ KIA ထဲမှာ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်တွေရှိကြည့်
နောင်တစ်ချိန် ဒီနယ်မြေ ဘာဖြစ်သွားမလဲ တွေးတောင်မတွေးရဲဘူး။ KIA က အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှ အကုန်လက်ခံတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့လည်း အင်အားရတယ်လေ။ သူတို့ အာဏာတည်ဖို့ဆို ဘင်္ဂါလီတွေက အစ အကုန်လက်ခံတယ် လို့ ပြောရမယ်။ ဒါ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ဘူး" ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
RSO အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံမှုအပေါ် KIO ဗဟိုကော်မတီ ဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ်လွန်ဒေါင်အနေနှင့်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမှု အရ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရား ၀င်ဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန် မော်က ငြင်းဆိုခဲ့
သည်။ သို့သော် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများကြောင့် ပြည်သူများ၏ ရင်ထဲတွင်
ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်များ ကြီးထွားလာစဉ် KIA နှင့် RSO ကြားဆက်သွယ်မှုများကြောင့်
ငြိမ်းချမ်းရေး ထိခိုက်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်း သိရှိရသည်။
တောင်းဆိုမှုနှင့် လိုက်လျောမှုကြား လွန်ဆွဲအမြတ်ထုတ်နေဆဲ UNFC
Posted by Unknown Thursday, September 11, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ စိတ်ကုန်ရ မလိုဖြစ်နေပါပြီ။ အားလုံး မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်း အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးဘဲ တောင်းဆိုမှုနဲ့ လိုက်လျောမှုတွေကြားထဲမှာ ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အေးစက်စက်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ တောင်းတဲ့သူတွေကလည်း ဖြစ်နိုင်လား၊ မဖြစ်နိုင်လား မစဉ်းစားဘူး၊ လိုချင်တာ မှန်သမျှ အကုန်တောင်းတယ်၊ ပေးတဲ့သူဘက်ကလည်း ပြည်သူကိုထောက်ထားငဲ့ညှာ ပြီး တောင်းသမျှအကုန်လုံး မဟုတ် ရင်တောင် ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး လိုက်လျောမှုတွေပြန်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း သြဂုတ်လ ၂၉/၃၀ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ United Nationalities Federal Council (UNFC)ရဲ့ အစည်းအဝေး နောက်ဆုံးနေ့မှာပဲ ကရင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ KNU က UNFC အဖွဲ့ထဲက နှုတ်ထွက် လိုက်ပြီဆို ပြီး သတင်းတွေမှာ တွေ့ရပါတော့တယ်။
အဓိက နှုတ်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းများစွာထဲက တစ်ခုကတော့ UNFC ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော ထား၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ထဲကနေ အလှည့်ကျ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် လုပ်ဖို့တောင်း ဆို မှုနဲ့ UNFC အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကိုင်တပ်များ အင်အားမညီမျှမှုကို ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သွတ်သွင်းပြီး UNFC အဖွဲ့ဝင်တိုင်း သဘောတူညီသယောင် ဆောင်ရွက်နေမှုကိုသည်းမခံနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံး နှုတ် ထွက်ခြင်းဖြစ် တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
KNU ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း UNFC မှာ ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ သူတွေဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်စားတဲ့ လူတွေများပါတယ်။ နိုင်ငံရေး သမားဆိုတာက လည်း သူတို့ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက် ဘာအ ခက်အခဲမှမရှိဘဲ ကမ္ဘာပတ်ပြီးရန်ပုံငွေရှာနေတဲ့ ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေများတယ်။ ၄င်းတို့လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ တောထဲမှာတစ်ကယ် သေသေကြေကြေလုပ်ခဲ့ကြရပြီး မသေလို့ရာထူးရလာတဲ့ အခါ ကျတော့ ၄င်းတို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကို နေရာမပေးဘဲ နိုင်ငံရေးလုပ်စားနေတဲ့ သူတွေကသာ အဲ့ဒီ့နေရာကို ချုပ်ကိုင်ထားကြတယ်လို့ ထင်ပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်အားအများဆုံး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ UWSA အဖွဲ့၊ မိုင်းလားအဖွဲ့နဲ့ SSA တောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေလည်း UNFC မှာအရင်က တည်းက မပါဝင်ကြပါဘူး။ ဘာလို့မပါဝင်သလဲဆိုတော့ UNFC ရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက် မယ့် ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြယ်လှယ် လာနိုင်တာတွေကို ကြိုတင်ရိပ်မိနေလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
KNU အဖွဲ့ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် KNU ဥက္ကဌကြီး မူတူးဆေးဖိုး က ဆွေးနွေး တဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ စိတ်မရှိဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း စိတ်ရင်းသဘောထား မှန်ကန်စွာ နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုတဲ့ အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ KNU အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ (၃)ကြိမ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ (၃)ကြိမ် တွေ့ပြီးပြီ ဆိုတော့ နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ သဘောထားနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့သဘောထား တွေကို သိထားပြီးပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် နေလာတဲ့ကာလအတွင်းမှာ UNFC ဘယ်လိုခြေလှမ်း တွေကို လှမ်းနေလဲဆိုတာသိလောက်ပြီမို့ စောစောစီးစီး အဖွဲ့က ရုန်းထွက်ခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်တော့ UNFC အနေနဲ့ အဖွဲ့အတွင်းမှာ အင်အားကြီးမားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ မရှိ တော့တဲ့အတွက် ၄င်းတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်ဆိုတာကိုလည်း မှန်းလို့မရသလို အလှည့် ကျ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ကလည်း ပျက်ပြယ်သလိုဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျန်တဲ့လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ဆိုတာလည်း လူနည်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးစုတွေ အလိုက် လက်နက်ကိုင်ဆောင်နေကြပေမယ့် လက် နက်ကိုင်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ အားလုံးဟာ သူတို့လူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ UNFC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကျန်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့(၁၁)ဖွဲ့ထဲမှာတောင် အချို့အဖွဲ့တွေထဲမှာ လူ(၄/၅)ယောက်ေ လာက်ပဲရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးလိုရင်းကို ပြောရရင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့  ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်သား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ရလာဒ် တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာမလားဟု ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ မျှော်လင့် ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက် တွေဟာ UNFC ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါဝင်တဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုသဘောထားအမြင်၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်ရေး အခြေခံ ယူဆချက်၊ ကွဲလွဲချက် တွေကြား မှာ ပျက်ပြယ်သွားတော့မလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Sexy မော်ဒယ်လ်တွေ ကပြမယ့် ပါတီ ကျင်းပမယ့်နေရာ အပြောင်းအလဲရှိ
Dance For Life ကျင်းပမည်ဆိုသည့် မူလ ကြော်ငြာ
Sexy မော်ဒယ်လ်တွေ ပါဝင်ကပြမယ့် Dance For Life ပါတီ ပွဲကို မူလကြော်ငြာထားတဲ့ GTR2 ကလပ်မှာ ကျင်းပဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ပါတီပွဲကျင်းပဖို့ ကြော်ငြာခဲ့စဉ်က GTR2ကလပ်မှာ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ကလပ်ဘက်က ပါတီပွဲပြုလုပ်ခွင့် မပေးတော့တာကြောင့် နေရာကို ပြောင်းလဲလိုက်ရတယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူဖြစ်တဲ့ DJ Japan က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီပါတီကို ကျင်းပမယ့် နေရာအတိအကျကို မသိရသေးဘဲ၊ လာမယ့်အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ကလပ်တခုမှာ ကျင်းပမယ်လို့ စီစဉ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့တတွေလည်း ဒီပွဲ မှာ အလှူခံဖို့ အစီအစဉ်ရှိမယ်၊ အဲဒီက ရလာတဲ့ငွေတွေကို HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို ထောက်ပံ့မယ်၊ ဒီပွဲအပေါ်မှာ အမြင်တွေ အမျိုးမျိုးရှိနေတယ်၊ ကြော်ငြာကိုကြည့်ပြီးလည်း ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပွဲလဲဆိုတာ လာကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ပြောချင်တယ်” လို့ ပွဲစီစဉ်သူ DJ Japan က ပြောပါတယ်။
အဲဒီပါတီပွဲလိုမျိုး ပွဲတွေ အများအပြား ကလပ်တွေမှာ ကျင်းပဖူးခဲ့ပေမယ့် ဒီတခေါက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်အကြောင်းကို Sexy Post မော်ဒယ်လ်တွေဖြစ်တဲ့ ဇွန်သဉ္ဇာ၊ ဇာဇာထက်နဲ့ ကဗျာကို တို့က သူတို့ရဲ့ facebook စာမျက်နှာတွေမှာ တရားဝင် တင်လိုက်တာကြောင့် ပါတီပွဲအပေါ် အမြင်တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်ကုန်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ဖြစ်လာပုံရတယ်လို့ သူက သုံးသပ် ပါတယ်။
“ဘယ်မှာလုပ်မယ်ဆိုတာကို လောလောဆယ် မပြောသေးဘူး၊ ကျနော်တို့က GTR2ကို နှုတ်ကတိနဲ့ပဲ နေရာ ငှားထားခဲ့တာကိုး၊ နောက်ထပ် အဲဒီလို အဖြစ်မခံချင်တော့ ဘယ်မှာ လုပ်မယ်ဆိုတာကို လောလောဆယ်မပြောသေးဘူး၊ ဒီပွဲကို ဖြစ်အောင်ကို လုပ်မှာပါ” လို့ DJ Japan က ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၅ အမီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြီးငါးကြီးစာရင်းဝင်ရန် ဗီယက်နမ်မျှော်မှန်း
Posted by Unknown Wednesday, September 10, 2014, under ပြည်ပသတင်း | No comments
လာမည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၌ အကြီးဆုံးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ် နှံသူ ငါးဦးစာရင်းဝင်ဖြစ်ရန် ရည် မှန်းထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဗီ ယက်နမ်အသင်း AVIM က တနင်္ဂ နွေနေ့ကဟနွိုင်းမြို့တွင်ပြောသည်။
၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံအထိ တိုးမြှင့်သွားရန်ရှိကြောင်း AVIM ဥက္ကဋ္ဌတရန်ဘာဟာက စက်တင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေ သောလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကို ဒေါ် လာ ၆၅၀ မှ ၇၀၀ ဘီလီယံအထိ မြှင့်တင်ရန် AVIM က ရည်ရွယ် ထားပြီး တစ်နှစ်လျှင် ဗီယက်နမ်ခရီးသွား ၃၅၀၀၀ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန်ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်ဟု ဗီယက်နမ်သတင်း အေဂျင်စီက ကိုးကားဖော်ပြထား သည်။
ယင်းအသင်းကို ၂၀၁၀ မတ်လက ဗီယက်နမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် BIDV ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ထူထောင်ခဲ့ပြီး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ မှာ BIDV ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် အသင်းဝင် ၇၆ ဦးရှိပြီး အများအပြားမှာ Petro Vietnam, Vietnam Airlines, Hoang AnhGia Lai Group and Vietnam Rubber Group တို့ကဲ့ သို့သော ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် အဓိက ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်ပြည့် မီရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပ ဒေရေးရာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲ ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် လွှတ်တော်သို့ AVIM က တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည့် ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အကာအကွယ် ပေးရေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ချမှတ်ရေးအတွက် သဘော တူညီမှုများရရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထည် ချုပ်လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှု၊ စွမ်းအင်၊ ဆောက်လုပ် ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘဏ္ဍာ ရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၌ ဗီယက်နမ်တို့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ကို အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ပေး ပါရန် မျှော်လင့်ကြောင်း AVIM ဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားသည်။
သူရ ဦးရွှေမန်းကလည်း မြန်မာသည် အခြားနိုင်ငံများမှသင်ယူပြီး ၎င်း၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာကို ပြင်ဆင်နေကြောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ရန်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် ဗီယက်နမ်မှ လယ်ယာ၊ ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ် လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ ပိုမိုဝင်ရောက်လာစေရန် AVIM အနေဖြင့် ကြားခံအ ဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးရန် ဦးရွှေမန်းက ပြောသည်။
စတင်တည်ထောင်ခဲ့ချိန်က စ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လေ့လာရန် လုပ်ငန်းရှင် ငါးထောင်ခန့်အား AVIM က စီစဉ်စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း ဗီယက်နမ်သတင်း အေဂျင်စီက ဖော်ပြသည်။
ဗီယက်နမ်လုပ်ငန်း (၅၆) ခုက မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလုပ် ဆောင်ရန်လိုင်စင်ရရှိထားပြီး ယင်းတို့တွင် ခုနစ်ခုမှာ ကြီးမားသော စီမံချက်များရှိကာ ရင်းနှီးငွေစုစု ပေါင်း ဒေါ်လာသန်း ၆၀၀ ရှိသည်။ အကြီးဆုံးစီမံချက်အနေဖြင့် ဟိုတယ်၊ နေအိမ်များနှင့် ရုံးများ ဆောက်လုပ်ရေး ဖြစ်ပြီး Hoang Anh Gia Lai Group က ဒေါ်လာသန်း ၄၄၀ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်နေကြောင်း သိရသည်။
လူတစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း အကျိုးစီးပွားထက် နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးမည်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြော
Posted by Unknown Wednesday, September 10, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဆွစ်ဇာလန်သမ္မတတို့ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆေးနေစဉ် (PETER SCHNEIDER/EPA)
ြ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ကို မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်မှ တားမြစ်ခံထားရခြင်း မရှိသင့်ဟု ယုံကြည်သော်လည်း လူတစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားထက် နိုင်ငံ၏အကျိုး စီးပွားကိုသာ ဦးစားပေးစဉ်းစား မည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့ စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင် ရန် မရှိကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် က ပြောကြားသည်။
ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက် NZZ သတင်းဌာနက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မှာ နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ထား၍ သမ္မတလောင်းဖြစ်ခွင့် ကန့်သတ်ခံနေရခြင်းအပေါ် မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘အခြေခံအားဖြင့်တော့ သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကို ဘယ်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ တားမြစ်မခံထား သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ် ဆိုတာ ရှင်းလင်းတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် သဘောကတော့ တရားဥပဒေနဲ့ အညီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ဆန့်ကျင်စရာမရှိပါဘူး’’ ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ သတင်း ဌာနက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သမ္မတလောင်းဝင်ရောက်ခွင့် မရအောင် ကန့်သတ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မကို ပြင်ဆင်ရန် မဲပေးမည်ဆိုပါက သမ္မတက မည်သို့မဲပေးရွေးချယ် မည်ဆိုသည်ကိုလည်း ဆက်လက် မေးမြန်းခဲ့သည်။
‘‘တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အကျိုးစီး ပွားထက် နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားတစ် ခုတည်းကို ဦးစားပေးစဉ်းစားမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ လူများစုရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း လေးစားရမှာ ဖြစ် တယ်။ အဲဒီနှစ်ချက်ပေါ်မူတည် ပြီး ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်ကို ချမှတ်နိုင်မယ်လို့ ယုံ ကြည်ပါတယ်’’ ဟု ၎င်းက ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် နောက်ထပ်သက်တမ်းအတွက် အနားယူလိုသည်ဟု မကြာခဏ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ယခုဥရောပ ခရီးစဉ်တွင် တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒပေါ်မူတည်၍ နောက်သက်တမ်း ဆက်လုပ်၊ မလုပ် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပြီးဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသမ္မတဖြစ်လိုကြောင်း ပြောကြားထားသော်လည်း မိမိ၏ မိဘ၊ သားသမီး၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းတို့မှာ နိုင်ငံခြားအစိုးရလက်အောက်ခံဖြစ်သူ တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သူများ မဖြစ်စေရဟု ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၉(စ)ကြောင့် သမ္မတဖြစ်ခွင့် ကန့်သတ်ခံနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
‘‘ဒေါ်စုသမ္မတ မဖြစ်လည်း လွှတ်တော်ထဲကနေ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ဖို့ကို ဆက်လုပ်သွားမှာ ပဲ။ အားလုံးက ပြောကြတာပဲ။ သားနှစ်ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ သား ခံယူလိုက်ဖို့။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စု က ဒါအတွက် သိက္ခာအကျခံပြီး မလုပ်ဘူး။ ပြီးတော့ ၅၉(စ)ကို လည်း လုံးဝမပြောဘူး’’ ဟု အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်း မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရှေ့အလယ် ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အာရပ်နွေဦးဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာရပ်နိုင်ငံများတွင် ရုန်းကန်နေရချိန် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေတည်ငြိမ်နေခြင်းမှာ တပ်မတော်၏ ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ် ကြောင်း လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရ လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေခြင်းအ ပေါ် ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့သည်။
အိုစမာဘင်လာဒင်အား ပစ်ခတ်စဉ်က ၀တ်ဆင်ခဲ့သည့် US Navy SEAL တပ်ဖွဲ့ဝင်၏ အင်္ကျီအား ၉/၁၁ အမှတ်တရပြတိုက်တွင် ပြသ
Posted by Unknown Tuesday, September 09, 2014, under | No comments
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အဘာ့တာ ဘတ်အရပ်ရှိ အိမ်တစ်လုံးသို့ US Navy SEAL တပ်ဖွဲ့က ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး အယ်လ်ခိုင်ဒါခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင်အား ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်၏ အင်္ကျီအား ၉/၁၁ အမှတ်တရပြတိုက်တွင် ပြသလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ Navy SEAL တပ်ဖွဲ့ဝင်သည် အိုစမာဘင်လာဒင်အား သေနတ်ဖြင့် သုံးချက်ပစ်ခတ်ခဲ့စဉ်က ယင်းအင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လုံခြုံရေးအတွက် ၎င်း၏ အမည်အား ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ယခုပြသထား သည့် အင်္ကျီတွင်လည်း အမည်အား ရေးသားထားခြင်းမရှိပေ။
အဆိုပါအင်္ကျီအား ပြတိုက်တွင် ထားရေးအတွက် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ လွှတ်တော်အမတ် ကာရိုလင်းမာရိုနေက “အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး စစ်ပွဲတွေ အတွက် အသက်တွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သတ္တိတွေကို ဂုဏ်ပြုပြီး ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကို အမှတ်တရ ရှိစေဖို့အ တွက် Seal Team Six တပ်ဖွဲ့ဝင်က သူ့အင်္ကျီကို ပြတိုက်အတွက် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဒဏ်ရာများဖြင့် မြင်တွေ့ရသော အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အိမ်အကူမိန်းကလေး
ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခင်းထဲက နိုဘယ်လ်ဆုရှင်လောင်းလျာများဆောင်းပါးရှင် မောင်မြင့်မောင် (မန္တလေး)သို့
Posted by drmyochit Monday, September 08, 2014, under တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြ,ဆောင်းပါး | No comments
တစ်နေ့က လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာအချို့မှာ ဝေဖန်မှုတွေများနေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်က ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခင်းထဲက နိုဘယ်လ်ဆုရှင် လောင်းလျာများတဲ့။
သမ္မတကြီးနဲ့ ဦးအောင်မင်းကို နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိသင့်တယ်။
အခုလက်ရှိ NLD နာယကလုပ်နေတဲ့ ဦးတင်ဦးသည် တစ်ချိန်က ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲဒီခေတ်ကာလက သောင်းကျန်းမှု
နှိမ်နှင်းရေးတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်၊ တာဝန်ရှိသူဖြစ်တယ်။
တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့လည်း ပြည်သူကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့
သူပုန်တွေကို တိုက်ခိုက်နေတာဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး၊
လက်ရှိ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါအ၀င်၊ အငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအားလုံးက ပြည်သူတွေကို ၀န်ချတောင်းပန်ရမယ်။
ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်နဲ့ အလှည့်ကျကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တွေက
နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားတွေကို ဆက်ပြီး
တာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးဆိုးရွားစွာ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လက်မခံနိုင်သည့် အရေးအသား။
တောထဲတောင်ထဲ၊ မိုးထဲရေထဲမှာ အပင်ပန်း အဆင်းရဲခံပြီး
သွားလာလှုပ်ရှားကာ နေ့မအိပ် ညမအိပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရသည့်
တပ်မတော်သားအားလုံးအား သိမ်းကြုံးစော်ကားလိုက်သည့် စကားဖြစ်သည်။ ယခုလိုအခြေအနေရောက်ရှိအောင်၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိအောင် ပြည်သူအများ
စိတ်လက်ချမ်းသာစွာဖြင့် လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်မှာ
ယနေ့ကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးရောက်အောင် တပ်မတော်အနေဖြင့် အသက်ပေါင်းများစွာ
စွန့်လွှတ်ကာ အနစ်နာခံခဲ့ကြရသည်။ ယခုကဲ့သို့ ရေးသားရဲသော
ဆောင်းပါးရှင်၏ ဦးဏှောက်ကိုလည်း တော်တော် အံ့သြမိသည်။
နောက်တစ်ခုက ဖယ်ဒရယ် တပ်မတော် ကိစ္စ။
ပြည်နယ်အလိုက် ဖယ်ဒရယ် ဖယ်ဒရယ် လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေ၊ အလှည့်ကျ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်မယ်လို့ အရှက်မရှိပြောနေတဲ့သူတွေ
၂) ကိုယ့်ပြည်နယ်ကလိုချင်တာလား ?
၃)ကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲက ဘယ် % ကလိုချင်တာလဲ ?
၄)ကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲက ဘယ် % ကကိုယ့်ကို ဖယ်ဒရယ်တောင်းဖို့Mandate ပေးထားသလဲ ?
၅)ပေးထားတဲ့ Mandateကရော ပြည်နယ်အတွင်းနေတဲ့သူ အားလုံးကိုကိုယ်စားပြုရဲ့လား ?
၆)ကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲက လူဦးရေအမှန်က ?
၇) ကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲမှာရော ဖယ်ဒရယ် လိုချင်တာ/ မလိုချင်တာ မရှိနိုင်ဖူးလား ?
၈) ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေရဲ့ဆန္ဒခံယူပြီးပြီလား ?
သေချာပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ စစ်သားဆိုတာ စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ခင်းကျင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ သူကဦးဆောင်ပြီး
ဘယ်တော့မှ မဆုံးဖြတ်ပါဘူး၊ စစ်ပွဲရဲ့ အနိဌာရုံတွေကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ရတဲ့
War is Peace ဆိုတဲ့အတိုင်းအချို့သော အခြေအနေတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်
စစ်မတိုက်ချင်သော်လည်း တိုက်ကြရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီနေ့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့
ကမ္ဘာ့အလည်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းနေနိုင်တာ
တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရပြီးမှ ဖြစ်လာတာပါ။
ဒါတွေကို တန်ဖိုးမထားရင်တောင် ကျေးဇူးကန်းရာ၊ စော်ကားရာ မဖြစ်စေသင့်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားတိုင်းက နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် မောင်မြင့်မောင်(မန္တလေး) ကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ကို
ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း ဘုံရန်သူအဖြစ်သာမြင်သင့်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်း သွေးကွဲအောင်၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအား
ပြည်သူအများ အထင်မှား အမြင်မှားဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဟာ
တစ်မျိုးသားလုံး ထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာကို သတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ အစိုးရကို ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်းထက်
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တန့်ခိုင်မြဲရေးကို အလေးထားသင့်သလို၊
နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပဲ ဦးတည်သင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး၏ အမျိုးသားရေးတာဝန်သည် အေးချမ်းသာယာပြီး
ဒီလို အနာဂါတ်နိုင်ငံတော်ကို ပုံဖော်နေတဲ့နေရာမှာ တပ်မတော်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကတော့
အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ခြင်း ဖြစ်မည်ဆိုတာကတော့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာပင်မလိုပေ။
မည်သူတို့ မည်သို့ပင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေကြပစေ တပ်မတော်ကတော့ စစ်တိုက်ရန်၊ စစ်တိုက်ရန်မရှိကလေ့ကျင့်ရန်၊စစ်တိုက်ရန်နှင့် လေ့ကျင့်ရန်မရှိက ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ
ကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ဆိုသည့်အတိုင်း ကျရာနေရာမှ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် မိမိတို့အသက်ကိုပင်ပဓာနမထားပဲ ဦးလည်မသုန်ထမ်းရွက်သွားမည်မှာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ရှိနေဦးမည့် တပ်မတော်သားတို့၏ သစ္စာအဓိဌာန်ပင်ဖြစ်တော့သည်....။
Posted by Unknown Monday, September 08, 2014, under အထူးသတင်း | No comments
ယနေ့နံနက်က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးအခြေစိုက်ရာ နေပြည်တော်တွင်
တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်းရာထူးကြီးအချို့ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရှိရသည်။
စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး ကို စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးအနေဖြင့်
တိုးမြှင့်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပြီး စရဖချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ ကိုလည်း
စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် (ကြည်း) နှင့် စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးအနေဖြင့်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ထွန်းဦး ကို စရဖချုပ်နှင့် စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးအနေဖြင့်
ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဦးကို စစ်ရေးချုပ်အဖြစ်
တိုးမြှင့်ခန့်အပ်ပြီး နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
အလားတူ မြောက်ပိုင်းစစ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းနောင်ကို ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှူးအဖြစ်
ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး မြောက်ပိုင်းစစ်တိုင်းမှူးနေရာအား ဗိုလ်ချုပ် ၀င်းဘိုရှိန်အား ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း
မေမြတ်နိုးကို ရဲတိုင်ပြီးအရေးယူမည်ဟု Miss Asia Pacific World ကော်မတီ သတိပေး
Posted by Unknown Monday, September 08, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ကိုရီးယားနိုင်ငံ Miss Asia Pacific World ကော်မတီက မြန်မာအလှမယ်မေမြတ်နိုးကို လိမ် ညာမှုများအတွက် ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့များထံသို့ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရေးယူရန် တောင်းဆိုသွားမည်ဟု ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကိုရီးယား အော်ဘဇာဘာ သတင်းစာတွင် စက်တင်ဘာ ၆ ရက် ဖော်ပြထားသော အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏ ကြေညာ ချက်၌ ယင်းကဲ့သို့ ရေးသားထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြေညာ ချက်တွင် မေမြတ်နိုးအား အချက် သုံးချက်ကြောင့် မယ်ပွဲဆုရှင် အဖြစ်မှ ဖယ်ရှားခဲ့ရသည်ဟု ဆို သည်။
အဆိုပါအချက်များတွင် အ ဆက်မပြတ်လိမ်ညာမှုများ၊ မိခင်ကို သုံးလနေထိုင်ခွင့်မပြုပါလျှင် သူကပါ သူ၏တိုင်းပြည်သို့ ပြန် မည်ဆိုသည့် ရိုင်းပျသော တစ် ကိုယ်ကောင်းဆန်သော အပြုအမူနှင့် ကော်မတီ၏စကားကို နား မထောင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်ဟု ကိုရီးယားနိုင်ငံ Miss Asia Pacific World ကော်မတီက ထောက်ပြထားသည်။
ထို့အပြင်မေမြတ်နိုးကို နိုင်ငံ တကာယဉ်ကျေးမှုမသိသူ နိုင်ငံ ကြီးသား မပီသသူ၊ ယဉ်ကျေးမှု ချင်းခြားနားချက်ကို မကျော်လွှား နိုင်ခြင်းဖြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံယဉ် ကျေးမှုကို လိုက်မမီသူအဖြစ် လည်း ၎င်းတို့က စွပ်စွဲထားသည်။ ကော်မတီက မေမြတ်နိုး၏ ကိုရီးယားခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍သြဂုတ် ၁၉ ရက်မှ ၂၇ ရက်ထိအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ သူမက ရင်သားခွဲစိတ်မှုမပြုခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း သြဂုတ် ၂၀ တွင် ခွဲစိတ်ခဲ့ကာ သြဂုတ် ၂၃ အထိ ဆေးရုံတွင်ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ သြဂုတ် ၂၉ တွင် မေမြတ်နိုးနှင့် ကော်မတီ ထိပ်တိုက်တွေ့ကာ သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင်ဆေးရုံက ဆင်းခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများက သူတို့ ကော်မတီနှင့် မေးမြန်းပြီး အခြေအနေမှန်ကို သိရှိသော်လည်း မြန်မာပြည်က သတင်းမီဒီယာများသည် စက် တင်ဘာ ၂ ရက်က အလှမယ် မေ မြတ်နိုးပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကိုသာ အခြေခံပြီးရေး သားထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အခြေခံရေးသားထားသော သတင်းမီဒီ ယာများသည် မြန်မာနှင့် ကိုရီး ယားနှစ်နိုင်ငံလုံး၏ ပုံရိပ်ကို ဖျက် ဆီးနေသည်ဟု ကိုရီးယားနိုင်ငံ Miss Asia Pacific World ကော် မတီက စွပ်စွဲပြောကြားသည်။ မေမြတ်နိုးကို အဆိုပါကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်၍ 7Day Daily က ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဖုန်းကိုင်ခြင်းမရှိပေ။
စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Miss Asia Pacific Worldကော်မတီသည် တစ်ကိုယ်လုံးခွဲစိတ်ရန် ပြောဆိုပြီး၊ လုပ်ငန်းရှင်များကိုဖျော်ဖြေရန် ပြောခဲ့ကြောင်းမေမြတ်နိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘီဘီစီနှင့် တခြားသတင်း မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော သတင်းများအရ ကိုရီးယားနိုင်ငံ Miss Asia Pacific World ကော် မတီသည် တခြား နိုင်ငံတကာ အလှမယ်များနှင့် အလားတူပြ ဿနာများရှိခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ယူကျူ့ဘ်ဗီဒီယိုတွင် လည်း အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံတကာမယ်များ ပြိုင်ပွဲတွင် မရိုးသားမှုကြောင့် စကားများ ငြင်းခုံနေကြသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို လည်း တွေ့ရသည်။ မယ်ဆု ပြိုင်ပွဲဆိုသော်လည်း ဆုငွေပေး ခြင်းမရှိဘဲ ဆုရသူမယ်ကို အဆို တော် မင်းသမီးဖျော်ဖြေသူ ဖြစ် အောင်သာ စပွန်ဆာအဖွဲ့အစည်း များဖြင့် ကူညီပေးလေ့ရှိပါသည် ဟု သူတို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် သရုပ် ဆောင်များ၊ မော်ဒယ်များ၊ မင်း သမီးများကို သူတို့၏အဖွဲ့အစည်း များ၊ မန်နေဂျာများက လုပ်ငန်း ရှင်များဖြင့် ဖိအားပေးပြီး ဖျော်ဖြေခိုင်းသည်မှာ ထုံးစံဖြစ်သည်။
မြန်မာပရိသတ်များသိရှိကြ သည့် နာမည်ကျော်ကိုရီးယား မင်းသမီး Jang-Ja-Yeon သည် ထိုကဲ့သို့ ပြဿနာများကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက် တွင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် သတ်သေခဲ့သည်။ သူသည် ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖျော်ဖြေရန် ဖိအားပေးခံရမှုကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျကာ သတ်သေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကိုရီးယားသတင်းဌာနများက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။
Posted by drmyochit Sunday, September 07, 2014, under ဓါတ်ပုံသတင်း,နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
မုတ်သုန်မိုးနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရေကျော်၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေက ပါကစ္စတန်မြောက်ပိုင်းနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ဒေသအတော်များများမှာ ရင်ဆိုင်နေရပြီး လတ်တလောအချိန်အထိ ဒီ ရေဘေးဒုက္ခအတွင်း လူပေါင်း ၃၀၀ ကျော် သေဆုံးပြီးဖြစ်သလို ရာနဲ့ချီပြီးတော့ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်မှုတွေနဲ့ ထောင်ချီပြီး အိုးအိမ်မဲ့သူတွေ လည်းရှိလာနေပါတယ်။